Ciidamada Ilaalada Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Jidh-dil Iyo Xadhig Iskugu Daray Guddoomiyaha Xisbiga SFP - Jigjiga Online
HomeSomalidaCiidamada Ilaalada Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Jidh-dil Iyo Xadhig Iskugu Daray Guddoomiyaha Xisbiga SFP
Jigjiga (JO) – Ciidamada ilaalada Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa jidh-dil u geystay, isla markaana xabsiga u taxaabay guddoomiyaha xisbiga Somali Federalist Part (SPF) Mr Yuusuf Xuseen, kuwaas oo ku weeraray badhtamaha suuqa.
Ciidamadan oo laga soo diray Madaxtooyada ayaa Guddoomiyaha SFP ugu tegay Hotel badhtamaha magaalada ku yaalla oo uu qado ku lahaa maalintii Salaasa, halkaas oo ay dibedda ugala soo baxeen ka hor intii aanay gacanta ula tegin.
Sida ay Jigjiga Online u xaqiijiyeen dad goob-joogeyaal ah, ciidamada raxan ciidamo ah oo u badan ilaalada Madaxweyne Mustafe ayaa gacanta saaray Mr. Yuusuf Xuseen, ka hor intii aanay u kaxaysanin goobaha ay dadka jidh-dilka iyo bahdilaadda ugu geystaan ee magaalada gudaheeda.
Yuusuf oo aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno ayaanay noo suurtogelin, hase yeeshee dad ka ag-dhow ayaa JO u xaqiijiyey inuu qabo dhaawacyo madaxa ah oo ay ciidamadu u geysteen, dhiig badanna ka baxayay.
Warku wuxuu intaa ku daray in su’aalaha Yuusuf lagu weydiiyey waddada dhexdeeda ay ka mid ahaayeen haddii uu xidhiidh la leeyahay xisbiyada siyaasadda ee Oromadu hoggaamiso, sida xisbiga Jawar Mohammed.
Dhinaca kale, war-saxaafadeed uu soo saaray xisbiga SFP, ayaa waxa lagu sheegay in guddoomiyahooda ay si xun u garaaceen ilaalada Madaxweyne Mustafe isla markaana ay xabsiga u taxaabeen Salaasadii.
War-saxaafadeedku waxa uu intaa ku daray in ciidamo Liyu Boolis ah oo ah ilaalada Madaxweyne Mustafe ay guddoomiye Yuusuf ugu yimaaddeen maqaaxi uu ka cuntaynayay kaddibna ay dibedda ula baxeen iyagoo su’aalo weydiinaya, hase yeeshee ay mar kaliya gacanta saareen.
“Guddoomiyaha xisbiga Somali Federalist Part (SFP), Mr. Yuusuf Xuseen oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ka hawl-gala deegaanka Soomaalida ayay garaaceen, kaddibna xidheen ciidamada ilaalada Madaxweynaha Deegaanku.” Ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray Xisbiga SFP.
“Salaasadii ayay xubnaha xisbiga SFP qado ku lahaayeen mid ka mid ah hotelada magaalada Jigjiga. Isla markii ay dhamaysteen qadada ayay usoo galeen ilaalada Madaxweynaha deegaanka ee “Liyuu Police”-ka ah, waxaanay u yeedheen Guddoomiye Yuusuf Xuseen oo ay bannaanka hotelka la tageen iyagoo ku bilaabay su’aalo kaddibna garaacay.” Ayuu xisbiga SFP ku yidhi war-saxaafadeedka.
Xisbigu waxa uu sheegay in Guddoomiyahoodu uu dhaawacyo ka qabo madaxa, isla markaana dhiiggu ka da’ayay markii ay ciidamadu xidhayeen, isla markaana aan wax daaweyn ah loo samaynin.